AirPods-ka cusub ee 3 oo diyaar u ah shixnad sida lagu sheegay warar cusub | Waxaan ka socdaa mac
Wax badan ayaa laga sheegayaa AirPod-yada cusub 3. In haddii ay u ekaan doonaan AirPods Pro, in ay sii wadi doonaan sii wadiddooda marka loo eego tusaalaha labaad iyo xitaa wararka xanta ah qaarkood waxay muujiyeen inay yeelan doonaan buuq baajin. Laakiin waqtigan la joogo ma ogin goorta ay awoodi doonaan inay suuqa galaan illaa iyo hadda. Falanqeeyaha Kang wuxuu qiyaasayaa in moodelkan seddexaad uu iib gelayo hadda. Xaqiiqdii waxay ahaan laheyd bishan.
Jiilasha soo socda ee Apple AirPods waa "markab diyaar" Jiilka labaad ee AirPods waa la joojinayaa bishan iyada oo ay sabab u tahay bilaabida AirPod-yadaas 3. Marka Kang ayaa soo jeediyay shabakadda bulshada Shiinaha ee Weibo. Sidii aan horey u sheegnay, ma ahan wararkii ugu horreeyay ee ka kaca AirPods 3, maadaama ay jireen warar xan ah iyo xitaa la sifeeyay sawirro iyo qaabab. Dhageystayaasha cusub ee wireless-ka waxay yeelan karaan naqshad la mid ah AirPods Pro, oo ay ku jiraan inay dherer u dhigmayaan. In kasta oo AirPod-yada cusub ay u ekaan karaan AirPods Pro, looma filayo inay yeeshaan buuq firfircoon. Taasi waa xaqiiqda. Joojinta buuqa waxaa laga heli karaa oo keliya moodeelka ugu qaalisan.
Ma ogin haddii soo bandhigida moodooyinka cusubi ay isaga noqon doonaan 23-ka bisha soo socota ee Maarso, sida Kang uu sidoo kale xusay waqtigaas, saadaaliyay in dhacdo ugu horeysay ee shirkadda Californian waxay noqon doontaa taariikhdaas. Laakiin si macquul ah, saadaasha la socota AirPods 3 in la fuliyo, waxay ku dhowdahay qasab in dhacdadani dhacdo taariikhda la tilmaamay. Sababtoo ah waqtigu wuu dhaafaa oo haddii aad rabto inaad si deg deg ah u sii deyso, waa inay degdegaan.
Sida had iyo jeer ku dhacdo xanta, kaliya waqtiga ayaa go'aamin doona haddii ay sax yihiin ama waxay ku sii jiraan noocyadaas saadaasha ah ee aan rumoobayn ee la illaaway.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » AirPods-ka cusub ee 3 ayaa diyaar u ah shixnad sida ay sheegayaan warar cusub